“Xuutiyiintu Wey Ka Baxeen Dekedaha Yemen….” Qaramada Midoobay – somalilandtoday.com
“Xuutiyiintu Wey Ka Baxeen Dekedaha Yemen….” Qaramada Midoobay
(SLT-Yemen)-Qaramada midoobay ayaa sheegtay Axaddii shalay in ka bixitaanka Maleeshiyada Xuutiyiinta ee Dekedaha Muhiimka ah ee Yemen ay ku dhacday si waafaqsan qorshii lagu heshiiyay.
War qoraal ah oo ka soo baxay Qaramada Midoobay ayuu Guddoomiyaha u qaaabilsan Qaramada Midoobay isku duwidda qorshahan, Michael Lollesgaard, waxa uu ku sheegay in dhamaan sadexda dekadood ay kormeer ku sameeyeen markii ay ka baxayeen milatariga, oo ay la wareegayeen ciidamada ilaalada xeebaha.
Waxa uu sheegay in maalmaha soo socda xoogga la saari doono sidii dekeddaha looga nadiifin lahaa qalabka militari, miino sifeynna loogu sameyn lahaa.
Ka bixitiaanka kooxda Xuutiyiinta ayaa bilaabatay Sabtigii, sida ku xussan heshiis ay dowladda ay taageeraan isbaheysiga Sacuudiga uu hor kacayo iyo Maleeshiyada Xiitiyiinta ee Iran ay taageerto ay ku gaadeen dalka Sweden bishii December ee sanadkii tagay.
Qiyaastii 60, kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalada, qarkana u saartay malaayiin dadka reer Yemen ah macluul. Ku dhawaad 3 malyun oo qof ayaa ku barkacay, laba meelood meel dadkaasna waxey u baahanyihiin gargaar deg deg ah.